Iscrew cofa ukukhupha amanzi emanzini abizwa ngokuba lulwelo kunye nokwahlula okuqinileyo, ibunjwe yikhabhathi yamandla, impompo yokondla, iipayipi zePVC, iimoto zobhedu kunye nesinciphisi, isikrufu sokucinezela umzimba kunye nesakhelo. I-screw mesh kunye ne-shaft yenziwe nge-Stainless 316, 304 okanye 201 ngokufanelekileyo, ikhava ephezulu inokuba yi-Stainless okanye iCarbon Steel. Inobuso obahlukeneyo kunye noyilo, isikwere esikude kunye negumbi lokushicilela okanye igumbi lesilinda elikhuphayo, umahluko kukuba kulula ukuvula ukuba ukhetha uhlobo lwesikwere.
Umatshini wokuhambisa amanzi kwi-Screw Press ubizwa ngokuba siSahluli somgquba, unembonakalo eyahlukileyo eyahlukileyo, elinye ligumbi le-cylindrical extruder elinye ligumbi lesikwere. Inkangeleko nganye inamandla ayo, isikwere esikhuphayo okanye kwigumbi lokushicilela kulula ukuvula ukukhangela ngaphakathi xa kukho umsebenzi wokugcina.
Umgquba okwahlula ulwelo olomeleleyo (amanye amagama: i-dehydrator, iprosesa yomgquba, umgquba owomileyo nomehluli owomileyo, isomisi somgquba, kunye nomgquba wemfuyo ohlukanisa ulwelo olomeleleyo-ulwelo ixesha, kunokwenzeka ukwahlula umgquba wokugungxula amanzi kunye nomgquba wokutshiza. Okwangoku, i-dehydrator eveliswe yinkampani yethu isebenzisa i-0.5mm, i-0.75mm, i-1.0mm izikrini zokucoca ulwahlulo. Ingasetyenziselwa ukwahlula okuqinileyo okumanzi kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni njengezinto zenkuku, umgquba wehagu, umgquba weenkomo, umgquba weegusha kunye nentsalela ye-biogas.
Lo matshini ukwasetyenziselwa ukwahlula ulwelo olomeleleyo lwentsalela yolwelo lwebiogas emva kokuvundiswa komgquba. Umba oqinileyo ohlukanisiweyo unomxholo wamanzi asezantsi kwaye kulula ukuwuthutha. Ingasetyenziselwa ngokuthe ngqo njengesichumiso sezinto eziphilayo. Ingasetyenziselwa ukunyanga amanzi amdaka asezifama. Amanzi okomisa okrwada kwabelwana ngawo njengesichumisi esingamanzi kunye nesichumiso esiqinileyo. Isichumisi esingagalelwanga ulwelo sinokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwizityalo zokusetyenziswa kunye nokufunxwa, kwaye isichumiso esiqinileyo singasetyenziswa kwiindawo ezinesichumiso. Kwangelo xesha, inokuthi ifakwe kwisichumiso somgquba, esinokuguqula inkunkuma ibe bubutyebi, kwaye siphucule ubume bomhlaba, obulungele ukhuseleko lwendalo kwaye bunokuvelisa izibonelelo zoqoqosho ezinkulu.
Imfuyo kunye nenkuku yeenkuku olwelo-isahluli esineempawu zobukhulu obuncinci, isantya esisezantsi, ukusebenza okulula, ukufakelwa okufanelekileyo kunye nokugcinwa, iindleko eziphantsi, ukusebenza kakuhle, ukubuyisa imali ngokukhawuleza, kwaye akukho mfuneko yokongeza naziphi na izinto ezityibilikayo; umatshini wamkela i-shaft shaft yamandla aphezulu, i-alloy enganyangekiyo ne-alloy spiral blade kunye nezikrini ezenziwe ngentsimbi engenasici. Iincakuba zedrako yomoya ziphathwa ngokukodwa, eziphindwe kabini kubomi benkonzo yezinye iimveliso ezifanayo.
chwetheza 180 200 210
Ukubamba amandla kw 4 5.5 7.5
Impompo amandla kw 3 3 3
Ubukhulu mm I-1800 * 1300 * 500 2100 * 1400 * 500 2400 * 1400 * 600